कर्मा तामाङ आयुषको शब्दमा प्रमोद खरेलको ‘जव तिमीले ’ सार्वजनिक ! (भिडियो) - Enepalese.com
कर्मा तामाङ आयुषको शब्दमा प्रमोद खरेलको ‘जव तिमीले ’ सार्वजनिक ! (भिडियो)
इनेप्लिज २०७४ फागुन १४ गते ११:३८ मा प्रकाशित
फागुन १३, काठमाडौं । रक्षा म्युजिकको प्रस्तुतिमा कर्मा तामाङ आयुषको बास्तविक जिवनमा आधारित रहेर तयार रहेको भिडियो ‘जव तिमीले ’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कर्मा तामाङ आयुषको शब्द, संगीत तथा प्रमोद खवरको आवाजमा रहेको गितलाई यस अगाडि अडियोलाई श्रोताहरुले अधिक मात्रामा मन पराएका थिए । आफ्नो प्रेमिका प्रति समर्पित एक प्रमिको भाव यो गीतमा पोखिएको छ ।
काठमान्डौको विभिन्न भागमा सुट भएको म्युजिक भिडियोलाई पछिल्लो समय चर्चामा रहेका निर्देशक विक्रम चौहानले निर्देशन गरेका छन् । भिम खड्का, कोपिला रसायली , दिनेश विष्टको सर्वोकृष्ट अभिनय रहेको छ । गितलाई प्रकाश खड्काले खिचेका हुन भने मिलन विकले सम्पादन गरिेका हुन ।
‘जव तिमीले ’को हेर्नुहोस भिडियोः